10 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး
ဥရောပကကျွန်တော်တို့ကိုဟောလိဝုဒ်ဟောင်းနှင့်မူပိုင်ခွင့်အစဉ်အမြဲသတိရနေသည်. ထို့ကြောင့်, ဥရောပရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မြို့ကြီးများ၏တမြို့တည်းအတွက်မြို့ပြဘဝဘဝ၌လှပသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုအမြဲဖြစ်ပါတယ်. ထမင်းစားခန်း, ယဉျကြေးမှု, အထူးလှည့်ကွက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ရှုခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသောဗိသုကာနှင့်အတူသမိုင်း, ဥရောပကိုအိပ်မက်မက်စေတဲ့အရာတွေထဲကအနည်းငယ်ပါ.
Nice ကမ်းခြေများမှဗီယင်နာရှိကောင်းကင်ဘားအထိ, ကျွန်တော်တို့၏ 10 ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးမြို့နားကသင်၏အကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်.
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်ဥရောပသို့သွားရန် Eco-Friendly နည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဤဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
Sachertorte သာလျှင်, ရိုးရာချောကလက် torte, သင်သည်သင်၏ဥရောပမြို့တော်အားချိုးဖောက်မှုအတွက်ဗီယင်နာကိုကျိန်းသေစဉ်းစားသင့်သည်. ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောတနင်္ဂနွေ, ဗီယင်နာအနေဖြင့်မြို့၏ရှုထောင့်များကိုရှုမြင်ရန်နှင့်သင်၏ရှုထောင့်မှကြည့်ရှုရန်များစွာသောရှုခင်းများကိုပေးသည်.
Kahlenberg မှစလိုဗက်ကီးယားကာရတ်စ်အထိသင်မြင်နိုင်သောနေရာမှစတင်ပါ. ထို့နောက်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲပြုလုပ်ရန်နှင့်ဗီယင်နာမြို့လယ်သို့ Franziskanerplatz ရင်ပြင်သို့ပို့ဆောင်ကဒ်တွင် Viennese ကော်ဖီသောက်ရန်အတုလုပ်ထားသောဒူဘိုင်းကျွန်းကိုဆက်သွားပါ. နေ့ကို Das Loft ကောင်းကင်ပြာဘားတွင်ကော့တေးဖြင့်ပိတ်။ ဒေသခံများနှင့်ရောနှောပါ.
2. Colmar, ပြင်သစ်
ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ဂျာမနီအကြားတည်ရှိသည်, ပြင်သစ်၌လှပသောရိုင်းဒေသနှင့်နီးစပ်သော, Colmar တစ် ဦး ဝိဇ္ဇာအတတ်အားနှင့်သာယာမြို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဒီမြို့ငယ်လေးဟာဥရောပမှာအကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်. သေးငယ်ပြီးကြွယ်ဝသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် 1000 ၎င်း၏မှော်လေထုမှထပ်ပြောသည်သောဥရောပသမိုင်း, သငျသညျsurelyကန်အမှန်ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်၌ချစ်ကြလိမ့်မည်နှင့်ကြာကြာနေဘို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်.
Colmar ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကလေးရဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ထဲကိုဝင်သွားသလိုမျိုးသင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်. ဥရောပ၌သင်၏မြို့နားကိုဖြုန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်ဗင်းနစ်မြို့ငယ်သို့လမ်းများပေါ်တွင်လှည့်လည်သွားလာခြင်းဖြစ်သည်, ရပ်လိုက်ပါ စပျစ်ရည်ဖန်, အဆိုပါ Alsace အထူး.
Colmar သည်ခရစ်စမတ်မြို့အပန်းဖြေခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးနွေ ဦး ရာသီအတွက်အလွန်လှပသည်.
ရထားအားဖြင့် Colmar မှပဲရစ်
ရထားအားဖြင့် Colmar မှဇူးရစ်
ရထားအားဖြင့် Colmar မှ Stuttgart
ရထားအားဖြင့် Colmar မှလူဇင်ဘတ်
3. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: ဗင်းနစ်, အီတလီ
တံတားများ, ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ရောင်စုံအိမ်များ, ပီဇာရနံ့နှင့် Aperol, ဗင်းနစ်ကိုလုပ်ပါ အိမ်မက် ဥရောပတစ်မြို့ချိုးသည်. သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ပြတိုက်, နှင့်မြင်ကွင်းများကိုသင်ရှည်နှင့်တိုတောင်းသောတနင်္ဂနွေထွက်ပြေးဖို့အဘို့အအလုပ်များစောင့်ရှောက်မည်. အလုပ်များသောနေရာမှထောင့်နားတွင်စတုရန်းပေငယ်လေးတစ်ခုအမြဲရှိသည်, ဘယ်မှာထိုင်လို့ရမလဲ, တစ် ဦး cappuccino နှင့် Panini ရှိသည်, သို့မဟုတ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ဆံပါ ဖုတ်ထားတဲ့အရသာပီဇာ ရှေးမီးဖိုပေါ်မှာ.
သငျသညျရှည်လျားတနင်္ဂနွေအဘို့အ pop စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ချစ်စရာကောင်းသည့် Burano နှင့် Murano ကျွန်းများသည်လှေစီးစီးရုံသာရှိသည်.
4. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: nice, ပြင်သစ်
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ပြင်သစ်ရီဗေးရားသို့အလျင်အမြန်ခရီးထွက်ခြင်းထက် ပို၍ လျှော့ပေါ့စရာမရှိပါ. လှပသော Nice နှင့်၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းသည်ဥရောပ၌အမှတ်ရစရာနွေရာသီမြို့နားကိုသွားရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်.
Cote D'Azur သည် Nice ရှိအကောင်းဆုံးကမ်းခြေများ၏တည်နေရာများဖြစ်ပြီး La Tour Bellanda သည်ထိုပို့စကတ်များကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ အမြင်များနှင့်နေဝင်ချိန်. နိုက်စီမြို့၏မြို့နားသည်လှပသောလူနေမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောထမင်းစားခန်းနှင့်ပတ်သက်သည်. ဒါကြောင့်, Nice မှာတနင်္ဂနွေကမင်းကိုမင်းကိုခံစားစေမှာပါ.
5. အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
အမ်စတာဒမ်ရှိမြို့တစ်မြို့အားချိုးဖောက်ရန်စဉ်းစားသောအခါစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်အရာမှာအနီရောင်မီးအိမ်ခရိုင်ဖြစ်သည်, စက်ဘီး, နှင့်တူးမြောင်းများ. ဒါပေမဲ့, ဒီသေးငယ်တဲ့ဥရောပမြို့ကမ်းလှမ်းရန်ဤမျှလောက်အများကြီးရှိပါတယ်.
နွေ ဦး ရာသီတွင်အမ်စတာဒမ်သည်ရောင်စုံအရောင်များနှင့်ပန်းများပွင့်လာပြီးနေရာတိုင်း၌သင်လှည့်ပတ်သည်ကဒ်ပြားတစ်ခုနှင့်တူသည်. တူးမြောင်းများ, လှေ, စက်ဘီး, နှင့်သင်၏ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကိုရောင်စုံရန်ပန်းများစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. Tulip ပြတိုက်မှ စတင်၍ Jordaan သို့တက်ပါ, ကဖေးများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဖက်ရှင်ဆိုင်ငယ်များ, တစ် ဦး အဘို့သို့မဟုတ် Oost နှင့် Rembrandt ပန်းခြံ ပျော်ပွဲစားနှင့်အပန်းဖြေ.
6. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: Cinque Terre, အီတလီ
Cinque Terre သည်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်သည်5ရောင်စုံနှင့် သာယာလှပကျေးရွာများ ပြီးတော့မင်းဘ ၀ အတွက်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးမြို့ပြချိုးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်. ကျဆုံးခြင်းနှင့်ဆောင်းတွင်း၌တည်၏, Cinque Terre ဟာအိပ်မောကျနေတဲ့အလှတရားတစ်ခုပဲ, ဒါပေမယ့်နွေရာသီမှာဥရောပမြို့ကြီးတွေလိုပဲစည်ကားနေတယ်. အကြီးမားဆုံး Cinque Terre ၏အားသာချက် ဥရောပမြို့ကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်သည်အလွယ်တကူသွားလာနိုင်သည်5ထက်နည်းအတွက်ကျေးရွာများ3ရက်ပေါင်း. ထိုကွောငျ့, Cinque Terre တွင်ရထားစီးရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသောကြောင့်သင်ထက်နည်းသောကျေးရွာများသို့သင်သွားနိုင်သည် 20 မိနစ်များ.
ချောက်ကမ်းပါးများပေါ်တွင်ထိုင်။ လှပသောကမ်းခြေများနှင့်ပင်လယ်ကိုလှမ်းမြင်နေရသည်, Cinque Terre ဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်. ထို့အပြင်, ကဖီးတွေအများကြီးရှိတယ်, စားသောက်ဆိုင်, အမြင်, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း မည်သည့်အရသာကိုက်ညီရန်. ဒါကြောင့်, သငျသညျမှာစပျစ်ရည်ကိုတစ်ခွက်နှင့်အတူအပန်းဖြေချင်တယ်ဆိုရင် ဒေသခံစပျစ်ဥယျာဉ်များ သို့မဟုတ်စွန့်စားရ, ထို့နောက် Cinque Terre ရှိမြို့နားသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
La Spezia မီးရထားဖြင့် Manarola သို့
ရထားဖြင့် Manarola သို့ Riomaggiore
မီးရထားဖြင့် Manarola သို့ Sarzana
Levanto ရထားဖြင့် Manarola သို့
7. ပရာ့ဂ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ဘီယာဥယျာဉ်, အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရှုထောင့်, နှင့်လှည့်လည်မှလမ်းကြား, ပရာ့ဂ်ကိုဥရောပမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့မြို့နားကိုလုပ်ပါ. ပရာ့ဂ်သည်အံ့ဖွယ်ရဲတိုက်များ၏အိမ်ဖြစ်သည်, သမိုင်း, ပြည်တွင်းစျေးကွက်, ကော်ဖီနှင့် pastry ကိုကိုင်။ ပန်းခြံများစွာထဲ၌ပျော်ပွဲစားထွက်ရန်ကဖေးများလည်းရှိသည်. လည်း, ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရှောင်ရှားရန်လျှို့ဝှက်ပြီးလှပသောနေရာများစွာရှိသည်.
ပရာ့ဂ်ဟာဥရောပမှာလူကြိုက်များတဲ့မြို့ပြနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်, တစ်နှစ်ပတ်လုံးအလွန်လူစည်ကားနိုင်သည်. ဒါပေမဲ့, ၎င်းသည်တနင်္ဂနွေတို့အတွက်အလည်အပတ်ခရီးလုံးဝရထိုက်သည်. ရထားပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲ, သင်ဤချစ်စရာကောင်းနှင့်ချစ်ခြင်း၌ကျလိမ့်မည် ပါ မြို့.
8. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: ဘရပ်ဆဲလ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ
သင့်မှာချိုတဲ့သွားတစ်ချောင်းရှိရင်, ဘရပ်ဆဲလ်မှာအားလပ်ရက်အပန်းဖြေအနားယူရလိမ့်မယ်. ဘရပ်ဆဲလ်၌သင်နှင့်မျှဝေရန်များစွာရှိသည်, ယင်း၏လက်ရာမြောက်သောအဖြစ် ကမ္ဘာကျော်ချောကလက် နှင့် waffles. ဖြည့်စွက်ကာ, ထက်ပိုပြီး 100 ဘရပ်ဆဲလ်မှာပြတိုက်တွေသင့်ကိုစောင့်နေတယ်. အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များသို့လည်ပတ်ပြီးလျှင်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များတွင်စားရန်အတွက် Danseart ကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည်. ဘရပ်ဆဲလ်ရှိနောက်ထပ်ကျောက်မျက်တစ်ခုမှာချစ်စရာကောင်းသည့် Place Sainte-Catherine နှင့် chic နှင့်ယဉ်ကျေးမှု Chatelain ဖြစ်သည်.
9. ဟမ်းဘတ်, ဂျာမနီ
ဂျာမနီ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့သည်ဥရောပရှိမြို့ပြတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဟမ်းဘတ်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးဆိပ်ကမ်းနှင့် Inner နှင့် Outer Alster ရေကန်များရှိသည်, ဘယ်မှာပျော်မလဲ အံ့သြဖွယ်လှေစီး.
Planten un Blomen သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်နေရာများရှိသောရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, မင်းရဲ့ကင်မရာကိုပိုကောင်းအောင်ထုပ်ပြီးဟမ်းဘတ်မှာရှိတဲ့သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်ကနေမျှဝေချင်တဲ့ရိုက်ချက်တွေအတွက်အသင့်ပြင်ထားပါ.
10. ဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစီးတီးချိုး: ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ
ဘူဒါပက်စ်တွင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဒူဘိုင်းမြစ်ကိုလှေစီးရန်ဖြစ်သည်. မြို့တော်နှင့်ဘူဒါပတ်စ်ရှိဗိသုကာပညာကိုအကောင်းဆုံးလေ့လာရန်မှာလှေဖြင့်ဖြစ်သည်. ကြီးစွာသောပြင်ပနှင့်မိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာဟနျဂရေီမြို့တော်ရမှတ်များ 10 ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့အားလပ်ချိန်.
တံတားများစူးစမ်း, ရိုးရာအပူဗတ်သွားရောက်ကြည့်ရှု, ပြီးတော့ဟန်ဂေရီယန်အစားအစာကိုမြည်းစမ်းခြင်းသည်ဘူဒါပတ်စ်မှဒေသခံတစ် ဦး အနေနှင့်သင်ခံစားရရန်လိုအပ်သည်. လည်း, Matthias ကိုသွားလည်ပါ ဘုရား, တံငါသည်ရဲ့ခံတပ်, နှင့်မြို့တော်ကိုနေဝင်ချိန်မြင်ကွင်းကိုများအတွက်ပါလီမန်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့သည်သင်တို့စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေကူညီရန်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည် သငျသညျယူရန်စီစဉ်ထားလှပသော ဦး တည်ရာကိုမြို့ချိုးမည်သည့်မှ!
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမြို့ ၁၀ မြို့” သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုတင်လိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-city-breaks-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎– (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မြို့ပြ မြို့ပြ မြို့ပြ summertraintravel TravelBudapest ခရီးသွား ပုဂံ